XAFLADDA DAAHFURKA LABADA BUUG EE LOO AAYI DOONO – GSD
XAFLADDA DAAHFURKA LABADA BUUG EE LOO AAYI DOONO
XAFLADDA DAAHFURKA LABO BUUG OO LOO AAYI DOONO!
Waxaa sabtida ee bisha Agoosto 2018, wadanka Norway waxaa ka dhacay xalflad si heer sare ah loo soo agaasimay, xafladda waxaa lagu daahfuraayey laba buug oo ay qoreen aqoonyahano soomaliyeed.
Buugga hore ayaa waxaa lagu magacaabaa BIDHAAMIYE, waxaa qorey Barbaariye Fanaanka soomaliyeed ee caanka ah ee Bashiir Cali Xuseen.
Buugga labaad waxaa qorey Dr Mohamed Hashi, oo ah buugga EREY BIXINTA caafimaadka ama health Dictionary, buuga waxa lagu turjumay luqadda Swedish iyo afka soomaliga waxaad ka heli kartaa erey kasta oo caafimaadka ku saabsan.
Sidoo kale xafladda waxaa ka hadlay xildhibaan Cabdi Cali Xasan oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda dhexe ee soomaliya, wuxuuna si kooban uga warbixyey siyaasada baarlamaanka soomaliya, sidoo kalena wuxuu u mahadceliyey qoraayaasha soomaliyeed ee waqtigooda galiyey qorista buugta aad muhiimka ugu ah somalida oo dhan gaar ahaan kuwa qurbaha ku nool.
Xaflada waxaa kasoo qeyb galay marti Sharaf aad u badan waxaana kamid ahaa Abwaan Axmadeey Cabdi Gaashaan laashinka weyn ee somalida aad u wada taqaan dal iyo dibad ba iyo waliba Saciid Cabdi Cawaale oo asagana sameeyey heesta caawa lagu furey barnaamija taasoo magaceeda la yiraahdo Shaqal iyo Shibane waxaana ku luuqeysay Maryan Ruun
Xafladda qiimaha leh waxaa waqti dheer galiyey sLuul Kulmiye oo kamid ah guddiga fulinta ee Golaha qurbajoogta Soomaiyeed ahna wakiilka dalka Norway,